उपत्यकाका स्वास्थ्यकर्मीमध्ये आधामा कोरोना संक्रमणले गरेको संकेत || विचार
उपत्यकाका स्वास्थ्यकर्मीमध्ये आधामा कोरो...
उपत्यकाका स्वास्थ्यकर्मीमध्ये आधामा कोरोना संक्रमणले गरेको संकेत
कोरोना संक्रमणको चर्चा कहिलेसम्म जारी रहला ? यस्को संक्रमणबाट पूर्ण रूपमा सुरथित भएको जनताले महशुस गर्ने दिन आउला कि नआउला ? यस्ता प्रश्नहरू जनताका मनमा आईरहेका छन् । तर उत्तर कतैबाट ढुक्कका साथ पाईने अवस्था छैन । यता हालैमात्र काठमाडौं उपत्यकाका स्वास्थ्यकर्मीमध्ये झण्डै आधामा अत्याधुनिक सीएलआइए बेस्ट एन्टिबडी टेस्टमार्फत जाँच गर्दा कोभिड–१९ को संक्रमण भएको पाइएको छ । डिसेम्बर ३ देखि २५ सम्म २० अस्पतालमा पुगेर कोभिड–१९ को एन्टीबडीको व्यापकता पत्ता लगाउन अत्याधुनिक सिएलआइए बेस्ट एन्टिबडी टेस्टमार्फत नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले जाँच गर्दा यस्तो पत्ता लागेको हो । अध्ययनले एन्टिबडीको जाँच गर्दा औसतमा मंसिरको पहिलो दुई सातासम्म ४५।३ प्रतिशतमा कोभिड–१९ रहेको देखिएको थियो । यस्तै अस्पतालको व्यापकता भने ३२.२ देखि ५७.२ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले जनाएको छ ।
काठमाडौंका २० अस्पतालका ८ सय स्वास्थ्यकर्मीको नमुना लिइएको थियो भने १८ प्रतिशत डाक्टर, ३६ प्रतिशत नर्समा, २२
प्रतिशत प्रशासनिक कर्मचारी, ७ प्रतिशत ल्याबका कर्मचारी, अन्य १७ प्रतिशत अस्पतालका कर्मचारीमा संक्रमण भएको अध्ययनका क्रममा पाइएको थियो । भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशमा अन्य पाँच प्रदेशबाट आउने व्यक्तिलाई कोरोना भाइरस परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ ।
यसैबीच नेपालसँग खुला सिमाना भएको भारतको महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश र छत्तीसगढ प्रदेशबाट अन्य प्रदेशमा जानेलाई कोरोना परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीबाट अत्यन्त प्रभावित भएकाले ती प्रदेशबाट आएकाहरूलाई परीक्षण अनिवार्य गरिएको जनाईएको छ। उल्लेखित प्रदेशहरूमा कोरोना भाइरसको महामारी अझै न्युन भएको छैन। त्यसैले ती मध्ये जुन प्रदेशबाट आएपनि उनीहरूलाई कोरोना परीक्षण गराउन निर्देशन छ,’ निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न प्रदेशहरूमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित र मृत्यु भएकाहरूको संख्यामा बृद्धि भएपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
भारतमा गत मंगलबार विहानसम्ममा थप १० हजार ५८४ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने अरु ७८ जनाको मृत्यु भएको छ। यो संख्या पछिल्लो २४ घण्टामा भएको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतमा अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएकाहरूको कुल संख्या एक करोड १० लाख १६ हजार ३ सय ४३ पुगेको छ । ती मध्ये एक लाख ४७ हजार ३ सय ६ अझै सक्रिय अवस्थामा रहेका छन्। त्यसैगरी कोरोनाका कारण भारतमा अहिले यो तथ्यांक लेख्न बस्दाका समयसम्म एक लाख ५६ हजार ४ सय ६३ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ प्रजातीको कोरोना संक्रमण् भारतमा ब्यापक भैरहेको छ । नेपालमा भारतबाट आउनेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण तर्फ नेपाल सरकारको कुनै ध्यानाकर्षण पाईदैन । - जनधारणा साप्ताहिकबाट